Jackets Classic zabesifazane: incazelo amamodeli izitayela
A ezihlukahlukene onobuhle kwenza kube nokwenzeka ukuba bagcwalise jackets ikhabethe yowesifazane zanamuhla, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa isitayela ehhovisi, kodwa futhi ezemidlalo kwansuku zonke. Izici usike onobuhle enze kube nokwenzeka ukuba agcizelele okhalweni noma bazisonga ngalezi endaweni, emathangeni, esifubeni nasemqaleni. jackets Classic zabesifazane kungenziwa ngokuthi kukho jikelele iningi amacala okungenzeka stylization. Engingakusho nje anezele onobuhle ezifana imininingwane eqondene izingubo, izicathulo nezinye izinsimbi. Ngaphezu kwalokho, kungaba hhayi kuphela ingxenye ehlukile wezigqoko, kodwa benza suit okungukuthi kakhulu ladies kulula matasa izingubo okukhethayo. Ukulanda jackets, kuhle ukucabangela wacondza izibalo, edingekayo yokugqoka, futhi umbala Iphalethi isitayela wadala. Kuyinto elula, ephumelelayo futhi esisebenzayo izingubo zabesifazane. Syech eside izintandokazi wezigqoko, ngakho kufanele ucabangele izinguqulo ethandwa kakhulu imifanekiso zakudala. Bayoba umthombo ugqozi kusakhiwo ikusasa izithombe.
Classic jacket single-breasted
Ngu definition, ibhantshi - liyisici we outerwear ibhizinisi. Kungaba kokubili iduna nensikazi, zakudala, sporty, nsuku zonke. Imininingwane esasenza jacket kukhona izikhala, lapels, izinkinobho sleeves. Kohlangothi webele emaphaketheni kungaba sokusebenza noma trompe-d'oeils. jacket Single breast kudinga khona kuphela umugqa owodwa we izinkinobho lapels ewumngcingo (enezinto phezu kwesifuba). Ubheka esivaliwe ngaphezulu yelinyenti kuqhathaniswa double breast. Kwesinye isikhathi lokhu imodeli ubizwa nangokuthi "jacket American." Inani izinkinobho kuhluka kumuntu kuya kwemine. Ubude elingenamikhono zakudala - kuze kube maphakathi no-ethangeni. Ukuba khona V emise naikiweko ubuye ngokuningiliziwe ehlukile. Ngaphansi kwalo, ungakwazi ukugqoka ihembe, phezulu, turtleneck. Jacket kuyinto ngokuvamile ingxenye imvunulo. Ngezansi Ungahlala esikhundleni jeans amnyama ukususa Okusemthethweni, okuyinto uhlushwa yakudala zabesifazane jacket. Kusukela sizogqokani ehhovisi ngaphandle iziketi kanye ibhulukwe? Ifanele encane emnyama noma emhlophe ingubo amadolo yobude. Textile ibhulukwe ngoba ehlobo, eside isiketi linqotshiwe amathoni kanye jeans amnyama uzokwenza nangezindlela ezithakazelisayo esithombeni.
jacket Classic double breast
Izici ehlukile lokhu isitayela wukuthi kukhona ezimbili zezitokisi ezingu-izinkinobho, kanye phansi, zazo abethela ukugqagqana. Kuyinto ngokwesiko ingxenye imvunulo. Wochwepheshe ukuncoma ukukhetha ziyaqothuka mncane jacket amantombazane noma abanikazi okhalweni, ngoba unikeza umthamo ezibukwayo engxenyeni phakathi ngalé kwezindaba khona izingqimba eziningana Indwangu obukhulu front line. Nakuba kunezinkolo ezimbili zezitokisi ezingu-izinkinobho, enye yazo zokuhlobisa futhi alisetshenziswa. Lokhu imodeli ibhantshi - a esuselwe ifomu sezikhonzi wamabutho asolwandle aseBrithani. Ngokwesiko, imodeli double breast oyohlala kahle sibalo, khetha nzima, nakuba umphumela kuba nesitayela umbukwane kuyazuzisa yini ngempela.
jackets Classic zabesifazane ngempela ihambisane emaphaketheni, slotted noma phezulu. Esikhathini amamodeli we isitayela British, basuke bayichezukisa engela kancane. jacket kabili breasted behlezi kahle ibhulukwe eduze esinamathelayo, iziketi kanye Skinny jeans ipensela ngenxa ngobuningi bayo owengeziwe. i samuntu okunjalo kudala ngezabelo ezibukwayo ishidi phansi futhi wenza ngalé.
Ngu definition, lokhu jacket, engesiyo ingxenye yezembatho okuyingxenye kanti uba into ehlukile zokugqoka. Kuye ungakwazi sithathe ibhulukwe ayibhangqiwe, jeans. Ezinye izinguqulo shayela blazer ezemidlalo jacket. Mancane esisemthethweni, wenza izindwangu ngomala kanye izakhi ezahlukene sekugcineni wokuqala noma cut. Ngokwesibonelo, inketho classical kungenzeka elalihlotshiswe ngegolide izinkinobho. Blazer nakho kungaba olulodwa futhi double breast. It has a cut ehlelekile, kahle ichazwe umugqa ehlombe futhi kumakwe okhalweni ndawo. Classic abesifazane jackets Blazers zihluke Palette iyincane imibala. Lesi sakamuva singabangela sithathe kunoma iyiphi umthunzi, futhi ubude ambalwa. Abaklami ukuhlobisa Blazers neminsalo, umphetho, kuze kudabuke umhlane, ruffles nezinye izici yokuqala, ukunikeza umfanekiso kwemizwelo futhi ususe imicikilisho ezingadingekile.
Lena ukulandisa okufutshane kakhulu jacket zakudala. Umqondo livela Bolero matador zokubhukuda. Ngokuvamile lesi sitayela lihlotshaniswa kusihlwa futhi izingubo zomshado. Vula emahlombe kalula amboze Bolero, kuyilapho nawe ungalushayi ngumthwalo ngal. Le nguqulo ye-jacket futhi ngokuvamile attribute kuyinto aphelele ibhizinisi ingubo nge phezulu t-shirts hlobo. Sew Kusuka okufanayo noma indwangu ukukhanya. Ungakhetha lace, uboya kanye Bolero wathungela. jacket Lokhu zabesifazane (yini ukugqoka ke - isitayela ngokuvamile ngokushesha futhi uhlobo lomkhiqizo Indwangu) azigcina izici eziningi onobuhle zakudala (umugqa ehlombe, imikhono nge izinkinobho, usike imicibisholo pectoral), kodwa lenzelwe ukwakha ukukhanya nesithombe njengabesifazane ngokuhlanganyela ingubo. Kungaba kungathiwa uyisiphingi nge ibhulukwe, ibhulukwe, iqonde topom side ngoba isitayela abayitoho.
Ukwakha indlela ngamabomu wesilisa nenhle ukukhetha ezifanele Tuxedo jacket ngesitayela. izinguqulo Female kukhona evelele okhalweni ndawo. Nakanjani, umfuziselo enjalo yisibaluli yeluhlolo lolungakahleleki ukuhlwa club isithombe. Ukhethwe phezulu Tuxedo sibalo zibukeke silinganise olinganise futhi ukufihla wonke amaphutha. Silhouette "hourglass", ungakha ngisho amantombazane aluhlaza ngosizo ezifana onobuhle jackets. Lapho zihlanganiswa kahle ukukhanya blouses ayevumela kanye eziqongweni shades hlangothi, kanye ne zakudala cut ibhulukwe, ibhulukwe elimnyama "Skinny" futhi stilettos. An side jacket zesifazane isitayela Tuxedo ubukeka ephelele nge ihembe elimhlophe iribhoni black esikhundleni uthayi futhi mfushane ibhulukwe ifomu esinamathelayo. Lokhu isethi kungenziwa ngokuthi i win win-noma ngabe isiphi isikhathi.
Isici evelela lokhu model tapering maqondana raskleshivayuschiysya okhalweni namathanga kanye umugqa ngalé. Ngokwesiko Basque - ibhantshi iDemo. Female isithombe nale imodeli kuba wagcizelela usengozini futhi enkulu. It yadalwa ngezinsuku lapho izintokazi egqoka omangalisayo, iziketi ububanzi. Iphansi Bell-phansi umphelelisi futhi asiqokomisa waistline ngamabomu. Manje, ngemva ikhefu kunalokho eside, Basque ibuyile vogue. It kufanela kahle izithombe kwansuku zonke. Fans of Retro-isitayela indlu jacket has eziningi eziwusizo - kuba encane, ke ugcizelela fragility kudala ngalé njengabesifazane kanye kuhlanganiswe iziketi kanye ipensela, kanye ibhulukwe. Wochwepheshe ukuncoma ukwelekelela ngayo izicathulo ne izinzwane ezicijile ukudala ukulingana ezibukwayo ngezabelo phansi.
Le nguqulo yanamuhla onobuhle zakudala. Jacket-ingubo kungenziwa igqoke njengoba isici esihlukile wezigqoko, futhi phezu ingubo mncane engasindi noma isiketi nge top. Ubheka njengabesifazane kanye zikanokusho, yisisombululo jikelele off-isizini futhi uyakwazi ukufihla eziningi sibalo amaphutha. Zifakwa cut okuqhamile okhalweni endaweni futhi ubude umugqa ngenhla noma amadolo ukuhlukanisa version zakudala dress-elingenamikhono. Phelelisa ke izesekeli ezibizayo, isigqoko, bamba izicathulo ne izithende, ukwakha zikanokusho ibhizinisi noma kusihlwa ukubukeka. Kuvele jacket zesifazane okufushane side ingubo noma ibhantshi kuyahluka kuphela khona kanye kwabantu ulwelwesi izicubu. Ngo samuntu yesibili futhi isebenzisa inlay okuqinile.
Vest (ijazi ijazi)
Le nguqulo zithandwa kakhulu abalandeli ibhizinisi isitayela. It kungenziwa igqoke ngaphansi ibhantshi njalo noma njengengxenye ahlukene suit. Vest is kahle kuhlangene ibhulukwe zakudala ngemicibisholo futhi isiketi ipensela. Ngaphansi kwakhe ukugqoka ihembe elimhlophe noma ihembe nesitayela evamile nje ingashintsha uzizamele ngokuphepha nabanye imibala kanye yezicathulo. Classic zabesifazane isudi, ibhulukwe nebhantshi kungenziwa ngci usebenzisa uvolo ivesti ebusika ekwindla. Ngaphezu kwalokho, kumlethela ehhovisi umfanekiso ubuntu, waba nesithakazelo esiqotho ukudala isitayela. Ukuze uthole club noma romantic ihlanganisa vest nge isikibha nesikhindi amabhulukwe tight noma jeans, izingubo, kulula, isiketi khulula.
jacket oversayz ngesitayela wesilisa
Lokhu "owesilisa" inguqulo ye jacket zesifazane azigcina zonke izimfanelo isitayela classic. zohlobo okuqondile futhi khulula kusivumela ukugcizelela fragility nangobuciko sibalo zesifazane. Kufanele uqaphele ukuba ukhethe isitayela kule izingxenye aphelele, ukudala ukulinganisela okudingekayo enkulu. Vala esinamathelayo futhi amabhulukwe tight-fitting, jeans, izingubo njengabesifazane kanye iziketi uzokwenza amanothi isitayela nesifazane. Ukuze ngamabomu "owesilisa" ngomfanekiso ibhulukwe kufanelekile ngemicibisholo, iziketi iqonde, izicathulo isitayela abayitoho (izicathulo, yama-Crocs, Oxford) kanye izesekeli ahlobene. Syech kanye nezingubo kwabesifazane ngesitayela oversayz - impela ethandwa imfashini mkhuba, okuyinto kumele uzihlole ukudala izithombe sihehe.
A short nebhantshi zakudala eside
Ubude kuya maphakathi no-ethangeni ubhekwa kuyinsakavukela yamukelwe. Ngo amasudi ibhizinisi labesifazane ovamile uwukuthi le ndlela. Fashion abizele izidingo zalo siqu, futhi ngesikhathi esithile, inani eliphakeme labangu-ukuthandwa onobuhle esifushane noma side. Benza-ke kungenzeka ukuba ukhethe inguqulo jacket, okuyinto efanelekayo ukuba uhlobo oluthile sibalo. jacket iDemo zesifazane Kunconywa intokazi Ngokugobekile noku abesifazane kwesiqu encane. Kuvele jacket side luluhle amantombazane okusezingeni eliphezulu nasebubini. Kulesi samuntu yesibili Ungahambisa e dress-elingenamikhono, okuxoxwe ngazo ngenhla ngawo.
Ukuhlaziya ukuhlukahluka zonke lezi onobuhle, kungenzeka ukuhlonza ongakhetha kwezilandelayo: Classic jackets olulodwa breast double breast, Vest (ijazi version) blazer (ezemidlalo kukho nsuku zonke), Basque, Bolero futhi Tuxedo. Ezinye izinguqulo kukhona ukushintshwa kuphela noma intuthuko imifanekiso classical, nabaqambi ezihlongozwayo ukunweba imigqa amaqoqo abesifazane. Akubalulekile ukuba bangayeki lokhu kuhlukahluka ngokunikeza ikhumbula futhi amathuba elingenakuqhathaniswa ukulungiswa okubonakalayo sibalo besifazane kanye olinganise. jackets Classic zabesifazane ungalokothi emfashinini, futhi izixazululo zanamuhla avumele ukuba zizame izitayela ezahlukene jackets ngoba ehhovisi, futhi nsuku zonke.
Marilyn Monroe ingubo a lokuzalwa Kennedy isithombe
Khetha ilungelo usayizi ihembe
Indlela ukukhetha ubhodisi lokondla?
Izikhumba ze-ugg zamadoda - induduzo nesitayela ezinkathini ezibandayo
Izingane US ubukhulu "Aliekspress": ithebula
Suit isiketi zesifazane - zabuna ezingaphelelwa isikhathi
Izinganekwane ezikhuluma ngabantu Tunisia
Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukwenza Fenichka ka kudabuke
Indlela igama usuku wengane lokuzalwa: ikhalenda isonto
Imidlalo zokufundisa for kids 1 unyaka
Uma iminyaka yobudala nzima
Ihhotela-Arthemisi Ihhotela Apartments 3 * (Protaras, Cyprus): ukubuyekezwa, izincazelo, izinombolo kanye nokubuyekeza
Kanjani ukufundisa ingane ukuze sifinyelele ngendophi? Nokukhuthazela nokuxhumana
Ukuzivocavoca ngemisipha ye-pectoral ku-gym. Ukuzivocavoca ukupompa imisipha ye-pectoral
Ngobani phlegmatic? Ubumnene isici
Nini futhi kanjani ukuze kulingane ingane passport abazali
Bisha izigaxa - kuyini? Ukusebenza ukususa: kuzibuyekezo, izintengo, izithombe